Linux Ebooks - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Linux Operating System အကြောင်းကို ပို၍ပို၍ စေ့စပ်စွာ သိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။လေ့လာကြည့်သင့်ကြောင်းပါ။
by Matthias Dalheimer
Last edited by tu tu; 22-10-2008 at 06:07 PM..
လူပျင်း, tharkaytathar, viva, zo
Linux for Network Application
Linux Operating System ကို အခြေခံမှ စတင်ပြီး လေ့လာလိုသူများ လက်စွဲထားရမည့် စာအုပ်။ မဖြစ်မနေဖတ်ရှုသင့်ပါသည်။
28-03-2007, 08:38 PM
13-08-2007, 06:57 PM
LinuxServer Management စာအုပ်
Linux Server အကြောင်းကို လေ့လာနေသူမျာ့း အတွက်ပါခင်ဗျာ .. ကျွန်တော့် ဆရာကိုယ်တိုင် ပြုစုထားတဲ့ စာအုပ်ပါ ..
i don't see how linux works book . what shall i do.
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kyi thar win အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kyi thar win ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by kyi thar win
ဘာကိုဆိုလို ချင်တာလဲ ပြောပါအားမနာပါနဲ့တင်ထားတဲ့ သူ ရေးထားသော ပိုစ့်ကို သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ လိုတာရှိရင်လည်းပြောပါ။ တခါတလေမှာ အရေးအသားတွေက လိုအပ်ချက်ရှိတာအမှန်ပါ။
23-12-2007, 03:01 AM
ကဲ.. ကိုကြည်သာဝင်းရေ..။ ဒီမှာယူလိုက်ပါဗျာ။
http://mihd.net/xz0ten ; howlinux.rar, 1 MB
Red Hat Linux နဲ့ ပတ်သတ်လို့လေ့လာချင်သူများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သင်ခန်းစာ note လေးဖြစ်ပါတယ်။
Linux Application ကို install လုပ် ပုံအဆင့်ဆင့်ကနေ Network Administration Level အထိပါဝင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ moemoe901 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by moemoe901
ပြန်စာ - Linux for Network Application
အစ်ကိုရေ ဘယ်မှာယူရမလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပါဦး.....ကျေးဇူးပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဟိန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ိ Download စင်တာမှာယူလိုရပါတယ် ။ File size များနေလိုပါ
Last edited by tu tu; 02-05-2008 at 04:40 PM..
ပြန်စာ - LinuxServer Management စာအုပ်
mediafire က Block ထားတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် mihd မှာတင်ပေးပါလား...Pls
Last edited by zawnaingxxx; 29-06-2008 at 05:58 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ zawnaingxxx အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
16-07-2008, 05:05 AM
ဒေါင်းလုပ်စင်တာမှာလည်း မရပါဘူးခင်ဗျာ Error တက်နေပါတယ် အားရင်ပြန်ကြည့်ပေးပါဥိးနော် ကျေးဇူးပါ...
Originally Posted by moemoe901
မတွေ့တော့ဘူး ကိုမိုးမိုးရေ.... ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်စစ်ပေးပြီး တင်ပေးပါဦး။
27-07-2008, 11:26 AM
ယူလို့ လဲ မရ ဘူး
Linux ကိုကျွန်က ကွန်မန်း တွေ က အစ လေ့ကျင့် ချင် လို့ ပါ
ဖြစ်နိုင်ယင် ကွန်းမန်း လေး တွေ ပါ မြန်မာ လိုပြန်ပေး စေချင်ပါတယ်
ကူညီ ပေးကြပါ ဦး ဗျာ ....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ရှင်နေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-07-2008, 01:09 PM
Originally Posted by nayminn
ကူညီပါ အုံး.............ဒေါင်းလို့ ရ ဘူး ဗျို့ 
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ linlinaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒေါင်းလုပ်စင်တာက လင့်တွေကအလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး ။ အောက်မှာ ကျနော် စုထားတဲ့ Linux နဲ့ဆိုင်တဲ့ PDF နဲ့ CHM လေးတွေမျှလိုက်ပါတယ် ။
How to Install your Linux Operating System - Rich Seymour PDF [5.25MB]
Linux : A Programmer's Guide
Linux : System Admins Guide
Linux : Shell Scripting Tutorial
Last edited by sawjonnie; 27-07-2008 at 04:37 PM..
28-07-2008, 10:53 AM
ဒေါင်း တော့ ဒေါင်းနေပြီ ဗျာ
Linux က ကွန်းမန်း တွေ အားလုံး စုစည်း ပေးပါလို့ နော်
ကွန်းမန်း လေးတွေကို မြန်မာလို ရှင်းလင်ထားတဲ့ ရှင်းချက်လေးတွေရှိယင်တင်ပေးကြပါဗျာ
အရာ အားလုံး အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
ပြန်စာ - How Linux Works
မြန်မာလို့ဖတ်ချင်နေတာ ....... ဘာသာပြန်မယ်သူမရှိဘူးလားလို့ တင်းနေတာ ...................
UBUNTU forum မှာလားမသိဘူး ရှာကြည့်လိုပါ ရှိပါတယ်
ယူလို့လဲ မရဘူး ဗျာ
လိုချင် လို့ပါ ဗျာ
လုပ်ကြပါဦး နော် ငိုချင်လာပြီ။
Linux ရယ်ဘယ်တော့များမှ ဆုံးဆည်းနိုင် ပါမလဲ
ပြန်စာ - Linux Ebooks
linux လေ့လာလိုသူများ အတွက် လက်ဆောင်
22-05-2009, 12:00 AM
HungryMinds - Linux+ Certification Bible
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ stability09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Hungryminds__Debain.Gnu Linux Bible
Originally Posted by ဟိန်း
ကိုဟိန်းရေ လင့်က သေနေပြီ လုပ်ပေးပါဦးဗျ .. ကျွန်တော် လိုချင်နေလို့ပါ ... လင့် ၃ ခုစလုံးသေနေပြီ .. အစ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့လင့်ကသာ တင်လိုက်ပါ ... မြန်မာလိုရေးထားတာလေးဆိုတော့ စပြီးလေ့လာတာနဲ့ မြန်မာလိုလေးဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ ... သဘောတရားနားလည်သွားမှ အင်္ဂလိပ်လို လေ့လာလိုက်မယ် ..
Last edited by ညီနေမင်း; 06-06-2009 at 12:07 PM..
ကိုဟိန်း ပြန်တင်ပေးထားတာက ပို့စ်နံပါတ်(၅) က စာအုပ်ပါ။
အဲဒီမှာ mediafire လင့်ခ် ကောင်းပါသေးတယ်။
ပို့စ်နံပါတ်(၁၁) က စာအုပ်က download center အဖျက်ခံရတုန်းက ပါသွားပါပြီ။
ပို့စ်ပိုင်ရှင်လည်း မလာတာကြာလို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။
တခြားမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေတော့ အောက်ကလင့်ခ်တွေမှာ ရှိပါတယ်။
omnitek team, zo
ကိုKoarkarhtut ခင်ဗျာ... အကိုတင်ပေးထားတဲ့ လင့်က 404 error ပြနေလို့ ယူလို့ မရပါ ခင်ဗျာ။ အကိုတင်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ချင်ပါတယ်။ အကိုတင်ပေးတဲ့ စာအုပ်နာမည်လည်း ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ လင်းနစ်မို့ လို့ဖတ်ချင်တယ်လို့ သာပြောရတာ... အခုထိဘာစာအုပ်မှန်း မသိပါဘူး... ကိုKoarkarhtut ကူညီပါအုန်းနော်.... ပြီးတော့ နည်းပညာအကြောင်းလေးတွေကို ဗဟုသုတရအောင် လူငယ်တွေ သိအောင်ဖြန့် ဝေပါအုန်းနော်... ကျေးဇူးတင်လျှက်....
ကိုညီနေမင်း၊ မတု နဲ့ ကိုစော ရေ Linux Demilitarized Zone (DMZ) နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးတွေရှိရင်ရှယ်ကြပါဦး။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Mon Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
linux ebooks, linux guide